Manantena an'Iza? | news2dago |
news2dago 04 Janoary, 2010 06:49 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Vita izay ny asaramanitra ary namorona ny tsy misy mihitsy ny tokotrano malagasy. Mba nanao izay tandrify azy teo na dia somary tao anaty fasahiranana aza. Nivalona ho tantara sisa ny taona 2009 ary tena mafy t@ vahoaka malagasy iny taona iray iny fa voadaka ihany ny farany. Maro ireo zavatra andrandraina @ty taona 2010 ity ka asa na ho tanteraka na tsia.
Voalohany @ ireny dia ny hifaran'ny adilahy politika sy ny fifampiandanina. Faharoa dia mba ahita asa ireo izay very asa sy tsy an'asa. Fahatelo dia mba hiverina tanteraka ny filaminana sy ny fahadiovan'ny tanana. Ny farany moa dia mba samy hitondra soa sy fanambinana ho antsika ity taona vaovao 2010 ity.
Vaovao ny taona vaovao koa ny herinandro ary fidirana miasa indray androany tena kamo be mihitsy a fa tsy afeniko anareo izany nisy ilay tsy fiasana lavalava kely teo iny tena nihisatra mihitsy namonjy ny toeram-piasana tsy maintsy anefa satria tsy hisy hanome anao eo raha tsy ny atsembohanao ihany no hinananao.
Jeritodika kely fotsiny ny t@ farany taona 31 desambra 2009 teo dia avy be ny orana nanomboka t@ 5 hariva. Maromaro ny fiara nanao accident t@ io fotoana io satria dia feno vakim-pitaratra ireo kihon-dalana sasany teto an-drenivohitra. Tsy mahagaga izany satria be ny revy sy ny fisotrona. Voalaza moa fa 3 no maty ny toaka t@ iny 31 desambra iny ary maro be ireo nanao "coma ethylique" hoy ny teny @ hjra.
Ny tena nanaitra ahy kosa dia nalaza be ny hira sudaf t@ iny farany taona iny ao izany oe "mama rhouda izany" dia ao koa izany "kabesa kabali" izany izay atao ny ankizy vazivazy moa oe tsaramaso kabaro! lol Saika mandeha @ radio foana moa ireo hira ireo. Takona indray ry Jerry marcos sy ry tsiliva t@ iny taona iny.